Ngokokuqala ngqa, uhulumeni wethu wayebhekene nezindaba zokuvikela izakhamuzi nezindawo ngesikhathi noma emva kokusebenza kwempi kuphela emva kokuphela kweMpi Yombango. Isici esiyinhloko kulolu shintsho sasihlobene ngokuqondile nentuthuko esebenzayo yezindiza kanye nokwenyuka kwezimangalo ezibhekene nesitha sangemuva. Kusukela ngo-1932, lezi zimpikiswano zahanjiswa yi-MPEV, futhi ngo-1961 lo msebenzi wawuphathiswa i-GO. Ngokuhamba kwesikhathi, ukubaluleka kokuzivikela ekusebenzeni kwezempi kuye kwehla, kodwa usongo lwezinto ezingenzi kahle ezenziwe ngabantu kanye nokungazinzi kwamandla emvelo kuye kwanda.
I-RSES iyisistimu ehlanganisiwe yombuso osebenzelana nokuvimbela nokuqedwa kwezimo eziphuthumayo. Kungumsebenzi wakhe ukuvikela abantu kanye nomhlaba kusuka emvelweni, eyenziwe ngabantu, noma ngabe yimuphi omunye uhlobo lwezimo eziphuthumayo. Isistimu ye-RSES iyiqoqo lezinhlangano zokuphatha, amabutho abo kanye nezindlela, kanye nezinhlangano zanoma yiluphi uhlobo oluphathelene nokuvikelwa kwezakhamizi kunoma yiziphi izimo eziphuthumayo.
Uhlelo lokuphathwa ku-RPSS luwumsebenzi onenjongo wabaphathi nabaphathi, ngenxa yokuthi ukuthuthukiswa nokuthuthukiswa kwemisebenzi yayo kwenziwa. Isisekelo sokuhlukaniswa kwesistimu yisimiso sokukhiqiza indawo. Ngamanye amazwi, linamazinga amahlanu:
Uhulumeni wezwe uhlanganyela ekuphatheni jikelele komsebenzi we-RSES. Izinga lithinta imisebenzi esemqoka. UMnyango Wezimo Eziphuthumayo unesibopho sokuqinisekisa ukusebenza kwesistimu nokuvikelwa okuphezulu kwabantu ngesikhathi kunoma yiziphi izimo eziphuthumayo. Ukuqondana kwezikhungo zokuphatha kukhona kuwo wonke amazinga wesistimu, bahlala besebenza futhi banesibopho sokubeka imisebenzi nokuxhumana, ukwazisa umphakathi nokunikeza ulwazi.
Imisebenzi esemqoka yezinga lesifundazwe
Yiziphi izinhloso zezinga lokuqala le-RRS? Lokhu ngokuyinhloko:
Ukwakhiwa nokusetshenziswa komgomo owodwa wokulawulwa kombuso wokuvimbela nokuqedwa kwezimo eziphuthumayo ngemuva kwezinhlekelele, izinhlekelele nezinhlekelele zemvelo.
Ukudidiyelwa kwezinhlangano zikahulumeni mayelana nokuthuthukiswa kwamaphrojekthi kanye neminye imisebenzi ehlobene nemisebenzi yabo, ngaphezu kwalokho, isethulo kanye nokucatshangelwa kwala maphrojekthi kuhulumeni.
Ukulungiswa kweziphakamiso mayelana nendlela engcono yokwenza uhlelo lwezinyathelo zokuvikela zonke izindawo zomsebenzi wabantu kanye nomphakathi ngokwawo, kanye nensimu yezwe kusuka ezimweni eziphuthumayo zezimo eziphuthumayo, eziphuthumayo noma ezimbi.
Inqubomgomo ehlanganisiwe yobuchwepheshe kumele iqhutshwe efaka isandla ekwakheni nasekuthuthukiseni amandla, kanye nezindlela ezithinta ukuvimbela noma ukuqeda izimo eziphuthumayo.
Izikhombisi-ndlela eziyinhloko zokuthuthukiswa, ukuthuthukiswa kunqunywa, ukusebenza kwe-ESDP kulawulwa.
Ukuthuthukiswa kohlelo lwezobuchwepheshe nolwazi lwesayensi ukusiza ukuvimbela izimo ezingalimaza abantu noma insimu yezwe ukuthi ihlelwe.
Imisebenzi yazo zonke izidumbu ezihlobene ne-RSES kufanele ihlanganiswe ngokuqinile, icindezele ezindabeni ezifana nokuvikelwa kwezokwelapha kwezakhamuzi, izici zenhlalo nezomthetho.
Izikhombisi-ndlela eziyisisekelo zokubambisana kwamazwe okuvimbela ukuvela kwezimo ezimbi zichazwa .
Imisebenzi ye-federal executive
Izinhloso zalesi simo se-RSES yizi:
Ukuqaliswa kokuphathwa kwamaphrojekthi ukuthuthukisa izinyathelo zobunjiniyela kanye nezokusebenza ezizovimbela izimo eziphuthumayo, ukwandise ukuthembeka kokuvikelwa kwezinhloso eziyingozi, futhi uvikele umnotho ezimweni eziphuthumayo.
Ukubamba iqhaza ekusungulweni nasekusetshenzisweni kwezinhlelo zikahulumeni kanye nezesayensi, ukuqapha ukulandelwa kwemithetho kanye nemigomo, kanye nokuhlola ukuthi ngabe imibuso ye-RPSS isebenza ngendlela evamile.
Ukuqinisekisa ukulungiswa kwamagatsha omnyango ekwenzeni izenzo ezidingekayo phakathi nezimo eziphuthumayo, kanye nokuxhumana kwabo ngesikhathi sokusebenza endaweni yesehlakalo.
Ukulungiswa kwezenzo zomzimba emsebenzini ophuthumayo ngezikhathi eziphuthumayo.
Ukudala kanye nokusetshenziswa kwamagatsha eminyango okusebenza ekuqedeni isimo.
Ukuqaliswa kwezinyathelo zokuvikelwa komphakathi kwabahlukunyezwayo, ukugcinwa kwamalungelo nemisebenzi yabantu.
Ukuthinta ukuthuthukiswa kwemithetho yokuphepha kanye nemigomo yezimboni, ukuvikelwa kwabasebenzi kanye namabhizinisi kusukela lapho kwenzeka khona izimo eziphuthumayo .
Ukulungiswa kwemisebenzi yokulungiselela, ukuhlinzeka ngolwazi oludingekile kubo bonke abasebenzi, kuhlanganise nokuphathwa, mayelana nokuphendula okuphuthumayo.
Ukuqhuba isitifiketi sabasindisi kanye nezinye izinhlobo zalolu hlobo.
Imisebenzi esemqoka ye-RAPS yeziphathimandla zendawo
Njengezinye izingxenye zesakhiwo zenhlangano, iziphathimandla zendawo kufanele futhi zenze imisebenzi ethile. Isayithi ngalinye lihambisana nemithetho nemigomo yalo. Izinhloso ezidingekayo, zonke izinhlangano ezihlobene ne-RSES okufanele zifezeke, ziyizi:
Ukuphatha imisebenzi yezixhumanisi nezinhlelo ezingaphansi kwe-RACS ensimini ngaphakathi kwamakhono abo.
Ukubamba iqhaza ekusungulweni nasekusetshenzisweni kwezinhlelo zesifundazwe nezesayensi.
Kufanele bahlanganyele ekuthuthukiseni nasekusetshenzisweni kwemisebenzi ehambisana nokuvinjelwa kwezimo eziphuthumayo, kanye nokunciphisa umonakalo emva kwalezi zimo.
Qinisekisa ukulungeleka kwazo zonke izikhungo zokuphatha, izindlela kanye namandla okusebenza uma kwenzeka izimo eziphuthumayo.
Ukusungula uhlelo oluhlanganisa izinyathelo zomthetho nezomnotho zokuvimbela ukuvela kwezimo eziphuthumayo.
Imisebenzi yeziphathimandla zendawo
Ukusungula isikhwama sezinhlelo zokugcina, lapho yonke imisebenzi ye-ESDP izosetshenziswa.
Ukulungiswa komsebenzi wezinkomishana ezenza imisebenzi yazo ensimini engaphansi kweziphathimandla zendawo.
Inhlangano yobudlelwane phakathi kwamakhomishana, izinhlangano zempi kanye nezinhlangano zomphakathi kanye nabameleli bamabhizinisi ezindaweni ezizungezile zokushintshaniswa kwedatha kanye nomsebenzi ohlanganyelwe ekuvinjeni nasekuqeshweni kwezimo eziphuthumayo.
Ukuqeqesha nokuthuthukiswa kochwepheshe kwabantu basekhaya kanye nochwepheshe be-RSES.
Imisebenzi eyinhloko yamakhomishini entweni
Ukusetjenziswa kwesiqondiso ekuthuthukiseni nasekuqalisweni kwemisebenzi evikela ukuphuthumayo, kanye nokwandisa ukuthembeka kokuvikelwa kwezintambo ezingaphephile, izindlela zokusebenza ze-ESDP kanye nomsebenzi wezinhlangano, uma i-ES ikhona.
Inhlangano yemisebenzi ekudaleni nasekugcinweni kwezinhlelo zokuqapha kanye nokuxwayisa kwendawo ezindaweni ezinobungozi obungozi bokuphuthumayo.
Izilawuli, amandla kanye nezindlela zokuqeda imiphumela yezimo kufanele zilungele ngokugcwele, ngaphezu kwalokho kubalulekile ukuthi abasebenzi bangasuswa kule ndawo ngokushesha futhi bengalahlekelwa.
Ukudalwa kwemithombo yezinto ezibonakalayo kanye nezemali ekusetshenzisweni kwazo ngesikhathi sokuvalwa kwezimo eziphuthumayo.
Ukulungiselela ubuholi bamandla kanye nabasebenzi ngezenzo ngesikhathi seziphuthumayo.
Ngokuvamile, ithimba lokuphatha liqukethe iphhini lamabandla kahulumeni, uhulumeni ozimele wendawo, kanye nezinhlangano ezithintekayo ekuvikeleni umphakathi, ukuvimbela kanye nokuqedwa kwezimo eziphuthumayo. Ukusebenza, ukuphathwa okuqhubekayo kwe-ESDP kuqinisekiswa ngokudala imihlangano yokuphatha yansuku zonke kuzo zonke izigaba zesistimu. Uma kunesidingo, dala amaqembu asebenzayo nabasebenzi. Kufanele banikezwe ngokuxhumana, ikhono lokukwazisa abanye, ukucubungula nokudlulisa idatha yolwazi oludingekayo. Ukuphatha uhlelo, zonke izindlela zokuxhumana zisetshenziswa ensimini yezwe, okwamanje isistimu yokwaziswa okuzenzakalelayo idalwe, okuvumela ukuthi isabele ngokushesha ngangokunokwenzeka kwenkinga.